Tempoly Closures | Reef Resilience
Mandritra ny fisehoan-javatra marevaka, ny manampahaizana dia afaka mametraka fanakatonana vonjimaika manodidina ireo faritra voakasika mba hisorohana ny fahavoazana hafa amin'ny fiantraikan'ny olombelona. Sary © Joe Bartoszek 2010 / Marine Photobank (ambony); Craig Quirolo, Fanamboarana Reef / Marine Photobank (ambany)
Ao anatin'ny toe-javatra mampihetsi-po, toy ny mandritra ny vanim-potoana mafana na aorian'ny rivo-doza mahery, dia mety ho mora kokoa ny haran-koditra aretina ary loharanon 'ny fiainana an-tany hafa. Amin'ny toe-javatra sasany, ny fanerena hetsika na fanakatonana ny habetsahan'ny vatohara dia mety ho tetik'ady manan-danja ho an'ny mpitantana mba hampihenana ny fiantraikany amin'ny vatohara mandritra ny fampitomboana ny fihenan'ny tontolo iainana na mandritra ny vanim-potoana fanarenana.
Ny tanjona izay mety ho fifantohana amin'ny ezaka amin'ny fitantanana fanampiny amin'ny fotoanan'ny krizy goavana dia ny:
Fifandraisana ara-batana amin'ny mpitaingina na ny vatofantsika
Fanjonoana (indrindra ny herbivores)
Raha misy ny fepetra mifanentana, dia afaka mametraka sehatra na toeram-piarovana ny tranonkala raha mihevitra izy ireo fa hanatsara ny vokatra ho an'ny vatohara. Na izany aza, misy ny fiheverana manan-danja rehefa mandinika ny fametrahana tranonkala. Ireo tompon'andraikitra dia tokony hamantatra ny fiantraikany mety amin'ny orinasan'ny fizahan-tany sy ny fokonolona, ​​ary koa ny fiantraikan'ny fifandraisana amin'ny mpandray anjara. Ny fiantraikany ara-tsosialy dia mety hamaivanina ary ny fanarahan-dalàm-pitomboana azo atao amin'ny alàlan'ny paikady entina hanampiana ireo mpandray anjara hahatakatra ny toe-javatra ary handray anjara amin'ny famolavolana ny valinteny fitantanana.
Fantaro raha mila fanampiana ny Corals
Ny dingana voalohany amin'ny fanampiana ny haran-koditra amin'ny alalan-tsindrimandry dia ny fankasitrahana rehefa iharan'ny tsindry izy ireo. Ny toe-javatra mampiahiahy dia afaka aseho amin'ny fiovan'ny mari-pahaizana momba ny tontolo iainana, toy ny toetrandro ambony, tsy fahita firy mangatsiaka, na tsy fahita firy loatra. Mety misy ihany koa ny fanondroana mivantana fa voan'ny tsindry ny vatohara, toy ny fampitomboana ny aretina na ny fivalozana. Bleaching Mety ho marika manan-danja tokoa izy io, satria samy voamarik'izy ireo ary misy fiatraikany amin'ny toe-tsain'ny ankapobeny (izany hoe mihamatanjaka matetika ny vatohara rehefa mipoitra ny mari-pana tsy mahazatra, ny mari-pahaizana ambany ambany, ny loto, ny saline, sns ...). Fandaharana fanaraha-maso natao hanomezana fampitandremana mialoha ny toe-javatra mampihetsi-po na famantarana ny fihenjanana dia mety ho zava-dehibe amin'ny famaritana rehefa mety mahazo tombony amin'ny hamafin'ny fitantanana fanampiny ny haran-dranomasina.
Mampihena ny fahasimbana ara-batana amin'ny fomba tsara indrindra
Amin'ny toe-javatra mampikorontan-tsaina, ireo mpitantana ny vatohara dia afaka mandinika fepetra hampihenana ny mety ho fahasimbana ara-batana amin'ny haran-koditra, indrindra amin'ny tranokala avo lenta na fampiasana haingana. Amin'ny fomba tsara indrindra, izany dia hitranga amin'ny alalan'ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fantsona sy ny vatofantsika. Anisan'izany ny fametrahana fampiofanana momba ny fitetezam-paritra manerana ny faritra afovoan-tany (fa tsy amin'ny haran-dranomasina), ny fanabeazana ny divay (anisan'izany ireo mpaka sary momba ny rano) momba ny maha-zava-dehibe ny fitetezana tsara, fahasalamana. Ny fametrahana toeram-piantsonana fitsangatsanganana azo atao dia afaka manampy amin'ny fitazonana ireo mpihinana snorkelers sy hampihenana ny filàna hiorina amin'ny vatohara raha reraka na manahy.
Ny fambolena fanampiny, na ireo tsy maharitra aza, dia afaka manampy ireo mpandraharaha mpitaingina sambo hahazo antoka ny sambony nefa tsy miteraka lozam-pifamoivoizana. Tokony hampahatsiahivina ny maha-zava-dehibe ny fiarovana amin'ny fomba izay miantoka ny vatofantsika sy ny fitaovam-piadiana tsy manatona ny vatohara rehefa tsy misy ny lay. Misy karazam-pampandrosoana maro ahafahana manamboatra fantsona sy fisakanana tsara indrindra, anisan'izany ireo izay novolavolain'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSarintanin'ny Great Barrier Reef Marine Park ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reef Alliance.
Fomba fanao tsara indrindra - mba hampihenana ny fahasimbana amin'ny haran-dranomasina
Aza avela hifandray amin'ny vatohara sy ny fiainana an-dranomasina hafa
Aza manenjika na mitaona biby an-dranomasina
Aza mitondra na velona na maty ivelan'ny ranomasina, afa-tsy ny fako vao haingana
Manaova fanaraha-maso tsara
Manaova tetika tsara sy fitsaboana
Ataovy izay hahazoana antoka fa ny fitaovana rehetra dia azo antoka fa tsy ahafahana mihazakazaka na misamboaravoara amin'ny vatohara
Manaraka fotsiny, manipuler na mamelona ny fiainana an-dranomasina eo ambany fitarihan-draharaha matihanina, tsy haka sary fotsiny
Aza mampiasa fonon-tselatra sy kneepads ao amin'ny faritra manodidina ny haran-dranomasina
Fikarakarana ny tsara indrindra
Diniho ny faritra mialohan'ny hikolokolo hitady toerana tsara indrindra
Ny vatofantsika amin'ny fasika na fotaka miala amin'ny haran-dranomasina
Ny fanamafisana ny toerana marefo na marefo, anisan'izany ny vorona sy ny soka-dranomasina, ny lova indizeny ary ny sambo vaventy
Fenoy ny sambonao ho lavitra lavitra ny sambo hafa
Tadiavo ny fiarovana ny olona ao anaty rano rehefa mandatsaka ny vatofantsika ianao
Aza afangaroy ny tady na ny rojom-borona manodidina ny bommies na ny loha lehibe
Raha asiana tanimboly eny amoron-drano, dia apetraho tsara ny vatofantsika mba hampihenana ny fahasimbana amoron-dranomasina sy ny morontsiraka
Raha misy vatofokofoka mandritra ny alina, dia ny vatofantsika alohan'ny fotoam-bolana ary manamarina ny efitranom-pivelomana
Mitondrà rojery ampy sy tsipika hahalalanao ny halaliny tianao haleha
Ampiasao ny vatofantsika ho an'ny toe-javatra iainanao sy ny tontolo iainana
Raiso ny vatofantsika rehefa mivadika ny tsipika
Raha tratra amin'ny vatohara ny vatofantsika, alao amin'ny tanana na aiza na aiza
Aza manery ny vatofantsika amin'ny alàlan'ny fandefasana azy
Ampiasao fotsiny ny rojom-bolo raha ilaina ny mihazona ilay sambo, tsy misy fiantraikany amin'ny fiarovana
Mitandrema tsara mba hahazoana antoka fa tsy misintona ny vatofantsika
Ny motera manoloana ny vatofantsika rehefa misintona azy
Manakana ny fialana sasatra
Afaka miasa ihany koa ireo manampahefana amin'ny sambo mpandraharaha sy ireo toeram-pivarotana mba hampihenana ny fialana amin'ny rano fisotro madio eo akaikin'ny vatohara mandritra ny vanim-potoanan'ny tontolo iainana. Ho an'ny fanaka, ity dia afaka mamolavola ny fandaniam-panafody any amin'ireo toeram-pitrandrahana any amin'ny toerana misy azy (izay misy azy) na entina mankany amin'ny tontolo an-dranomasina lavitra ny haran-dranomasina (izany hoe any anaty rano lalina). Ho an'ny tranom-panjakana izay mivoaka ao amin'ny tontolo an-dranomasina, toy ny orinasa fitrandrahana ala na fantsom-pahitra, dia mety hisy safidy hitazona ny fandaniam-panafody mandra-pahatonga ny fahasamihafana ho an'ny vatohara, na farafaharatsiny farafaharatsiny rehefa mifangaro ny hery anaty (lehibe, mikoriana).
Ireo mpitantsoratry ny haran-dranomasina dia mila miara-miasa amin'ny fikambanana hafa raha ny mikasika ny fitantanana ny fitrandrahana ny fitrandrahana, fa amin'ny alalan'ny fomba fiasa miara-miasa, dia matetika ny sehatra ahafahana manentana ny fomba fanao tsara indrindra na ny fampiharana sy fampiharana ny lalàna manan-kery.
Miaro ny fambolena mandritra ny fotoam-ponenana
Ny haran-dranomasina voajanahary dia mety ho afaka hibebaka amin'ny zava-nitranga mahery vaika (toy ny fisehoan-javatra marefo izay mahatonga ny olona ho faty, na oram-baratra mahery). Na izany aza dia mety ho simba tanteraka ny dingana fanarenana raha toa ka mihena ny dingana lehibe, toy ny herbivory. Ny fandraràna tsy ara-potoana amin'ny fanangonam-bokatra amin'ny toeram-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany izay voasedra dia mety hanampy amin'ny fanasitranana vatohara ary mety ho raisin'ireo manampahefana ho toy ny tetik'ady fanampiana vonjy aina. Na izany aza, mety tranainy ny ilàna ny fananana toerana misy azy mandritra ny taona maromaro, farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny fanondranana ny vatohara efa nodiavina hatramin'ny ambaratonga voalohany.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana an'ny mpitantana ny haran-dranomasina amin'ny fitsaboana coralmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reef Alliance Best Practice Guidelines
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTranoben'ny Harin-dranomasin'ny Harin-dranomasina Lehibe